Apple inoburitsa tvOS 13.3 uye watchOS 6.1.1 yevashandisi vese [Yakagadziridzwa] | Ndinobva mac
[KUKUDZIRA - Apple yakaburitsa macOS Catalina]
Masikati ezuva ranhasi ari kugadzirwa maererano nehurongwa hwesoftware uye zvigadzirwa zve software. Masikati ano Apple ichangoburitsa itsva Mac pro uye iyo Pro Ratidza XDR skrini kune vese avo nyanzvi vanofarira kutenga kwavo, uye maminetsi mashoma apfuura ivo vachingoburitsa vhezheni itsva yevashandisi vese iOS 13.3, iPadOS 13.3, tvOS 13.3, watchOS 6.1.1 uye iyo nyowani vhezheni yePodPod.
Mukutenda isu tinotarisira kuti mangwana ichave nguva yeMac yekuvandudza mashandiro uye nekudaro isu tatova nedenderedzwa rakavharwa maererano neshanduro nyowani Pakupedzisira shanduro nyowani dzaive dzakagadzirira kusunungurwa nhasi uye Apple haikundike neyakagadziridzwa ayo akasiyana OS.
Chii chakamira kubva pane izvi shanduro nyowani dzeTVOS uye watchOS zviri pachena kuti iko kugadzirisa mukugadzikana uye kuchengetedzeka kweiyo OS. Isu tinoona tisinganyanye nhau mune idzi dzepakati shanduro, asi ichokwadi kuti zvakakosha kugadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona kutora mukana wemhinduro uye gadziriso inogadziriswa inoitwa mavari.
Rangarira kuti kugadzirisa Apple Watch iwe unofanirwa kuve ne50% bhatiri uye chishandiso chakabatana nechaja. Muchiitiko cheApple TV iwe unogona kugadzirisa kubva kune Zvaunofarira uye nezvezvimwe zvishandiso zvakafanana. Apple haina kuomarara uye zvakare inotangisa iyo nyowani vhezheni yeHomePod, gadziriso iyo vashandisi vazhinji vanogona kutya mushure mekundikana kweshanduro yapfuura uye kuti zvirokwazvo vamwe vakamirira kuisa, kunyangwe chimwe chinhu chikatadza ... Muchidimbu, isu takatarisana shanduro itsva ne chengetedzo uye kugadzikana kwakanangana nekuvandudza hurongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa tvOS 13.3 uye watchOS 6.1.1 yevashandisi vese [Yakagadziridzwa]